FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Toriteny Alahady 01 Mey 2016
– Main Menu –Fidirana Fotoana	- Programa fiangonana - Programa sampana Soratra Masina	- Toriteny alahady - Toriteny manokana - Fampianaram-pinoana - Mofon’aina - Fandalinana Soratra Masina Mpitandrina Samihafa	- Tantaran’ny Fiangonana - Sary samihafa - FAQS Fitaizana	- Biraom-piangonana - Sekoly Alahady - Fifohazana - Lehilahy Kristiana - Dorkasy - Vokovoko Manga - Mpanazava sy Tily - Vondrona Fototra Laika - Tanora Kristiana	- - Feo Mamy - - Akon’ny Paradisa - - Artistika - Sampanasa sy asa	- - Asa Fitoriana ny Filazantsara - - Asa sosialy - Fikambanana	- - Loholona sy Diakona - - Katekomena - - Hafa Fifandraisana
Natao ny 18 mai 2016, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona A.
Genesisy 1, 1- 5 ; Matio 10, 16 – 20 ; 1 Korintiana 12, 1 – 6
Miditra ao anatin`ny Volana Mey 2016 isika, volana Mey izay hibanjinantsika FJKM ny lohahevitra hoe : « Miasa amin`ny Fanahiny ny Tompo« . Ndeha ary hodinihintsika amin`ireo Teny voalahatra ho antsika amin`ny Alahady 01 Mey 2016 ity fa Miasa amin`ny alalan`ny Fanahiny tokoa Andriamanitra. Asan`ny Fanahin`Andriamanitra izay tafapaka eo amin`ny fiainan`ny olomboafidiny na ny Fiangonana izany. Jerentsika eto ary ny Asan`ny Fanahin`Andriamanitra tafapaka ao amin`ny Fiangonana.
1. Asan`ny Fanahin`Andriamanitra mitondra fiainam-baovao
Gen 1, 1 – 5 , manambara amintsika ny fomba nentin`Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Ny mahazatra antsika eto dia hoe Niteny Andriamanitra dia <ary> ny zavatra rehetra. Raha jerena anefa ny Teny voasoratra dia nanana anjara toerana lehibe tamin`ny faharian`Andriamanitra izao tontolo izao ny <<Fanahiny>>. Hoy ny voalaza ao amin`ny and.2 : <<Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; aizina no tambonin`ny lalina. Ary ny Fanahin`Andriamanitra nanomba tambonin`ny rano>> .
Ny hoe : <<nanomba>> dia mitovy amin`ny <<mikotrika>> hoy ny mpandinika. Tahaka ny akoho mikotrika ny atodiny mba ho foy sy ho lasa aina hisehoan`ny zanaka akoho araka izany ny filazana hoe : <<ny Fanahin`Andriamanitra nanomba…>>. Raha tsy misy reny akoho mikotrika ny atody dia tsy foy ny atody, araka izany dia tena asa lehibe tokoa tamin`ny asa fahariana izao tontolo izao ny asan`ny Fanahin`Andriamanitra ho amin`ny fahariana izao tontolo izao. Izao tontolo izao izay foana sady tsy misy endrika, nilona tao anatin`ny aizina, nosaronan’ny aizina rehefa teo ny Fanahin`Andriamanitra nanomba dia tonga amin`ny fahariana, filaminana, fahazavana : tontolo vaovao izany.
Noho ny asan`ny Fanahin`Andriamanitra, niaraka tamin`ny Tenin`Andriamanitra Teny Mpahary dia miova ho amin`ny fahatsara ahafahana monina izao tontolo izao. Noho ny asan`ny Fanahin`Andriamanitra dia misy aina, fahavelomana izao tontolo izao.
Mazava araka izany fa mitondra fiainana, fahariana ny asan`ny Fanahin`Andriamanitra. Miova ny tontolo rehefa miasa eo ny Fanahin`Andriamanitra, miova ny tontolo rehefa manaiky hiasan`ny Fanahin`Andriamanitra ka ny aizana tonga mazava, ny fikorontanana tonga filaminana.
Ry havana malala, mazava araka izany dia rehefa miasa eo amin`ny fiainan`ny olona ny Fanahin` Andriamanitra dia mitondra fiainam-baovao izany. Mazava ny voalaza ao amin`ny Jaona 3, 5 – 8 fa mitondra fahateraham-baovao ho an`ny olona manaiky handray Azy sy iasany ny Fanahy Masina. Mazava tokoa ny tononkirantsika ao amin`ny Hira : 178 …. FO VATO ho tonga FO VAOVAO , eny manamafy izany ny Tenin`Andriamanitra ao amin`ny Ezekiela 36 , 22 – 30 …
Mazava ary araka izany, tian`Andriamanitra hiditra ho amin`ny fiainam-baovao tokoa ny olombelona nohariana ka izany no nanomezany ny Fanahy Masina. Koa raha te-hanana fiainam-baovao ianao meteza iasan`ny Fanahin`ny Tompo ; raha miasa ao amin`ny fiainanao tokoa mantsy ny Fanahin`Andriamanitra dia ho resy ny aizina mitady handrakotra ny fiainanao, hametraka fiainam-pilaminanam fiainam-piadanana ho anao ny Fanahy Masina, eny hiaina amin`ny fiainam-baovao ahafahanao mandovany tena fiainana Izy.
2. Asan`ny Fanahin`Andriamanitra mitondra Manome fahasahiana amin`ny asany
Matio 10, 16 – 20 no ndeha indray ho raisintsika. Teny nataon`i Jesoa Kristy tamin`ny mpianatra izany. Tsy maintsy miatrika ady sarotra, fakana am-bavany ny mpianatra eo amin`ny fanatanterahana ny asan`ny Tompo kanefa na dia izany aza dia eo ny Fanahin`Andriamanitra mampiteny, mitaridalana amin`izany.
Hoy ny voalaza eto amin`ny and.20 : <<….>> Ny Fanahin`ny Ray ( Fanahy Masina ) izay ao anatin`ny olona no miasa ka ahafahan`ny mino manatanteraka ny asan`Andriamanitra eo anivon`izao tontolo izao. Rehefa miatrika sy manatanteraka ny asan`Andriamanitra tokoa mantsy ny olony, ny mpino dia misy hatrany ireo mitsangana ho fahavalon`ny zanak`Andriamanitra, manelingelina, manakantsakana. Manoloana izany indrindra no isian`izao teny fampanantenana, teny fanomezantoky ho an`ny mpino avy amin`i Jesoa Kristy izao.
Miseho eto fa noho ny asan`ny Fanahin`Andriamanitra dia afaka miteny ny mpino, afaka maneho hevitra, toa tsy hevitry ny mpino no lazaina fa ny Hevitr`Andriamanitra. Miteny ny hevitr`Andriamanitra, ny hafatr`Andriamanitra manoloana ny toe-javatra tsy maintsy atrehiny sy sedrainy. Miteny ny mpino, mahay miteny manandrify ny tokony holazaina eo anatrehan`izao tontolo izay. Izany hoe tsy hanatahotra na hihemotra fa hiroso hatrany satria miasa sy mampiteny izay tokony hambarany ny Fanahin`Andriamanitra.
Mazava araka izany fa : rehefa eken`ny mpino hiasa ao anatiny ny Fanahin`Andriamanitra ( Fanahy Masina ) dia afaka mijoro tsy amin-tahotra manatanteraka ny asan`Andriamanitra ny mpino. Feno fahasahiana sy faherezana hijoro ho vavolombelon`Andriamanitra satria resy lahatra fa miasa eo amin`ny fiainana amin`ny alalan`ny Fanahiny Andriamanitra, miantso ny fitarihin`ny Fanahin`Andriamanitra isan`andro eo ampanatanterahana ny asan`Andriamanitra mba ahita fahobiazana, handresy ny sarotra.
Ry havana malala, mametraka ny fiangonana, ny mpino ho vavolombelony eto amin`izao tontolo izao tokoa Andriamanitra. Sarotra ny asa, misy ny fahavalo. Mazava anefa ny fampanantenana fa nomeny ny Fanahy Masina ny mpino, io Fanahy io no Fanahy miasa manolontsaina, manome hevitra, mampiteny, mampijoro. Noho izany ny mpino manana ny Fanahin`Andriamanitra dia afaka mandresy ny olana rehetra hatrany satria ny hevitr`Andriamanitra no mitondra sy mitarika azy.
3. Asan`ny Fanahin`Andriamanitra mitondra ho amin`ny fiombonana
1 Korintiana 12, 1 – 6 no ndeha hodinihintsika indray. Eto dia miresaka ny amin`ny asan`ny Fanahy Masina sy ny fanomezam-pahasoavana samihafa ananan`ny mino ao amin`ny fiangonana i Paoly Apostoly.
Misy fanomezam-pahasoavana samihafa ao anatin`ny fiangonana, midika izany fa misy olona maro ao amin`ny fiangonana, samy manana ny fahasamihafany ny olona ao amin`ny fiangonana kanefa na dia eo aza izany rehetra izany dia : iray ihany ny Fanahy masina, iray ihany ny Tompo ary indrindra Andriamanitra iray ihany no miasa amin`izay rehetra sy amin`ny olona rehetra.
Raha dinihina araka izany izao ambaran`i Paoly Apostoly izao dia mazava , samy manana ny Fanahy Masina ny mpino, fa ny Fanahy Masina no manolotra fanomezam-pahasoavana ho an`ny mino, ny Fanahy Masina no mitarika ny olona hahay hanambara ny finoany an`i Jesoa Kristy.
- voalohany : Ny finoana dia mampiombona, rehefa ao anatin`ny olona ny Fanahy Masina dia miombona amin`ny finoana an`i Jesoa Kristy ny olona.Mitondra ho amin`ny fiombonan`ny mino ny asan`ny Fanahy Masina
- faharoa : Ny fanomezampahasoavana izao nomen`ny Fanahy Masina ao amin`ny olona dia entina iasana, hanompoana an`Andriamanitra ao amin`ny fiangonana, fanomezam-pahasoavana entina manao ny asan`Andriamanitra. Araka izany ny Fanany Masina dia mitarika ny olona ho amin`ny fiombonana amin`ny asan`Andriamanitra, eny aza ambara fa fiombonana ao amin`ny fiangonana.
Mazava araka izany fa mitondra ny olona ho amin`ny fiombonana ny asan`ny Fanahy Masina, rehefa manaiky itoerana sy iasan`ny Fanahy Masina ny olona dia miditra ho amin`ny finoana an`i Jesoa kristy ary miaina amin`ny fiombonana noho ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana nomena azy.
Rehefa manana ny Fanahy sy iasan`ny Fanahy Masina ny mpino dia tonga ho amin`ny fiombonana. Mazava loatra satria ny asan`ny Fanahy Masina ao anatin`ny mino dia fitiavana.
Ry havana malala, nomen`Andriamanitra ny fiangonana ny Fanahy Masina mba hamelona finoana sy manome fanomezam-pahasoavana hanompoana Azy. Raha manaiky hovelomina sy hotarihin`ny Fanahy Masina tokoa araka izany ny mino dia tonga eo amin`ny fiainana ny teo-tsain`ny fiombonana, ny fifankatiavana ivelomany. Matetika misy olona tsy mety miara-miasa amin`ny fiombonana na dia milaza ho mpino kristiana aza, mazava izany fa ny olona tsy manaiky ho amin`ny fiombonana sy ny fiaraha-miasa dia ny olona tsy manana ny Fanahy Masina. Ny olona manana ny Fanahy Masina dia mitoetra ho amin`ny fiombona hatrany. Diniho ary miasa ao anatinao ve ny Fanahy Masina. Mitoetra marina ho amin`ny fiombonana ve ianao na dia samy hafa aza ny fanomezam-pahasoavana ananao.
Ny mpino manana ny Fanahy Masina ary dia mahay miombona amin`ny fanompoana an`Andriamanitra, eny mahay miombona amin`ny fanarahana ny Tompo. Amena.
Hafatra ho an’ny mpino